Fiidiyo - Telling the Real Story
Sheekadii Ali Baashi
Ali waxaa lagu qasbay inuu ka baxsado Soomaaliya si uu uga baxsado qoritaanka Al Shabaab. Waxa uu galay safar halis ah oo ay ku hayeen tahriibayaal kala duwan oo ku sugan dalka Libya. Ugu dambeyntii, waxaa loo daadgureeyay Niger iyada oo loo sii mariyay habka Gaadiidka Gurmadka Degdegga ah ee UNHCR (ETM) si looga daadgureeyo qaxootiga iyo magangelyo-doonka nugul ee Liibiya.
Yaasmiin waxay lahayd makhaayad yar oo ku taal magaaladeeda Soomaaliya. Maalin maalmaha ka mid ah ayay ragga qafaalatay qaarna way kufsadeen. Ka dib waxay noqotay mid bulshada dhexdeeda laga caayo, dadku waxay joojiyeen inay lahadlaan oo joojiyaan imaansheedii maqaayada. Waxay sii joogi kari weyday halkaas waxayna goaansatay inay ka baxdo Soomaaliya, iyada oo qaadaysa marinka tahriibka ee u sii gudbaya Yemen iyo Suudaan una sii gudbaya Liibiya, iyada oo rajeynaysa in ay gaadho Yurub. Waxay ku xidhnayd Liibiya ugu dambayntiina waxay UNHCR u daadgureeysay Niger halkaas oo uu sugayo dib u dejin.
Cabdi wuxuu gurigiisa uga cararay abaarta iyo nabadgelyo-xumada guud ee ka jirta Soomaaliya. Wuxuu u safray Yemen markii hore, ka dibna wuxuu aaday Suudaan wuxuuna u sii maray Saxarara ilaa Liibiya. Wuxuu si xun ula dhaqmay iyo bahdilaad gacan tahriibiyaasha. Waxaa lagu xidhay Liibiya ugu dambayntiina UNHCR ayuu u daadgureeyay Niger halkaas oo uu sugayo dib u dejin.
SheekadII Liibaan Maxamed: Qolkii Jidh dilka ee cidlada ku yaalay
"Waxaa halkaas ku yaalay qol ay ugu yeedheen “Cadaabta” ama “qolka geeridi” marka ay halkaas noo qadeen, waxay naga soo laalaadiyeen saqafka sare ee qolka, wayna na jidh dileen, iyagaa oo noo isticmaalaya koronto iyo caag la dhalaaliyay”
Sheekada Foosiyo: Waxaan Kasoo Horjeeda Tahriibiyaasha
Foosiyo waa hooyo keli ah oo Soomaaliyeed oo la mid ah aayaha ay la wadaagto hooyooyin kale oo badan oo Soomaali ah: wiilkeeda waxaa qabtay tahriibiyayaal ku sugan Libya kuwaasoo dalbaday lacag aad u fara badan siideyntiisa. Laakiin Foosiyo kaliya maahan dumar Soomaaliyeed oo caan ah, laakiin waa abwaanad iyo u ololeeya arrimaha bulshada. Waxay aasaasay koox waaliddiin ah oo carruurtoodii laga afduubay iyagoo ku sii jeeday Yurub.
Kulunkii ooo bulshada: wacyaglinta Tahriibka
"Waxa ugu muhiimsan aniga waxay ahayd inaan la kulmo qof ka sheekeeyay khibradiisa ah inuu la safro tahriibiyeyaasha." Munaasabad ka dhacday magaalada hargeysa dhalinyarada ah ee tahriibinta dadka ayaa u sheegta asxaabtooda khibradooda. La soco sheekada!
Sheekada Stella: Ilmaha ka baqaya in loo masaafuriyo meel aysan aqoon
“Dadku waxay iweydiyaan 'Halkee ku soo kortay? Xagee ka timid Run ahaantii ma dhihi karo waxaan ka imid Talyaanigu ama waxaan ka imid Soomaaliya sababta oo ah garan maayo waxay u egtahay, halkaa ma joogin… "